Dowladda Soomaaliy oo dhoofinta xoolaha nool kala xaajoonaysa Sacuudiga – Radio Daljir
Dowladda Soomaaliy oo dhoofinta xoolaha nool kala xaajoonaysa Sacuudiga
Febraayo 17, 2019 5:57 b 0
Ra’iisul Wasaare Kuxigeenka dalka Mahdi Guuleed (Khadar), waxaa socdaalkiisa ku wehlinaya Wasiirka Maaliyada Soomaaliya C/raxmaan Ducaale Beyle iyo Wasiirka Xanaanada Xoolaha Xuseen Maxamuud Sheekh Xuseen.
Safarkooda oo qaadan doona mudo Todobaad ah, ayaa waxa ay ku hormari doonaan magaalada Riyaadh ee xarunta Sucuudiga, halkaasoo ay kula kulmi doonaan Madaxda Boqortooyada Sucuudi carabiya iyo sidoo kale Jalaiyada Soomaaliyeed, iyagoo soo joogi doona laba Cisho.
Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle oo ka warbixiyay qorshaha safarka, ayaa carabka ku dhuftay in dowladda Sacuudiga ay kala hadli doonaan arrimaha deyn Cafinta, kabka dhaqaalaha, Dhoofinta Xoolaha iyo sidii Acmaasha Xajka loogu fududeyn lahaa mawaadiniinta Soomaaliyeed.
Booqashadooda Riyaadh kadib waxey u sii gudbi doonaan magaalada Jidah, halkaasoo ay kulamo ku saabsan sidii loo dhoofin lahaa Xoolaha Soomaalida ay kula qaadan doonaan Masuuliyiinta Sucuudiga shir socon doono laba Cisho.
Xoolaha nool ee la dhoofiyo ayaa Soomaaliya u ah laf dhabar dhaqaalle oo aad u baaxad wayn, inkastoo Sacuudiga uu marar badan uu cuno qabatayn dalkiisa kasaaray xoolaha Soomaaliya in loo dhoofiyo.
Mareykanka oo gargaar u diray wadanka Venezuela